CIX၊ စတုတ္ထကြိမ်မြောက် EP album “Hello, Strange Dream” ဖြင့် comeback လုပ်ခဲ့သည် - 빵야뉴스
승인 2021.02.04 19:46
[BBANGYA News｜Khaing Reporter] အဖွဲ့ CIX သည် ၂ရက်နေ့ ညနေတွင် သူတို့၏ စတုတ္ထကြိမ်မြောက် EP album “Hello, Strange Dream” (4th EP Album HELLO Chapter Ø. “Hello, Strange Dream”)ကို ထုတ်ဝေသည်။ “Hello, Strange Dream” (4th EP Album HELLO အခန်းØ။ “Hello, Strange Dream”) ကို ထုတ်ပြန်ရန် အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
CIX သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သော C9 Entertainment မှ အဖွဲ့ဝင်ငါးဦး ပါဝင်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ “Hello, Stranger” အယ်လ်ဘမ်ကို “Hello, strange space”နှင့် “Hello, strange time” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ၎င်းသည်' HELLO 'စီးရီးများ၏ နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သီချင်းခေါင်းစဉ်'Cinema' မှ 'Stairway To Heaven' အထိ ၂၄ ‌ယောက်၏ အစစ်အမှန်သံစုံတီးဝိုင်းသံဖြင့်' Round2'CIX ၏အသံ၊ ရက်ပ်နှင့် cappella နှင့် မတူကွဲပြားသောခံစားချက်များကို ဖန်တီးရန်နှင့် လူငယ်နှင့် CIX ၏ တောက်ပသောငယ်ရွယ်မှုကို သီဆိုခြင်း။ R&B ပါ၀င်သည့် သီချင်းဖြစ်သော “Everything” အပါအ၀င် သီချင်း ၅ ပုဒ် ပါဝင်ပြီး CIX သည် ပြောင်းလဲမှုအသစ်နှင့် တိုးတက်မှုအသစ်ကို ခံစားစေခဲံသည်။
ခေါင်းစဉ်သီချင်း ‘Cinema’ သည် ဖြစ်ရပ်များ အားလုံးမဖြစ်မီ လှပသောအချိန်များ အကြောင်း ပုံပြင်များပါသော သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ သီချင်း၏ ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ up-tempo rhythm နှင့် တက်ကြွသော တေးသီချင်းသည် အတိတ်၏ အိပ်မက်ဆိုးများနှင့် ဂီတကို ကွဲပြားခြားနားသော CIX ၏ ဆွဲဆောင်မှုအသစ်ကို ရှင်းလင်းစွာပြသသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် CIX (BX, Seunghun, Bae Jinyoung, Yonghee, Hyunseok) သည် ဒု ၂ရက်နေ့ ညနေတွင် SBS MTV'The Show' စတုတ္ထကြိမ်မြောက် EP album HELLO Chapter Ø. ‘Hello, Strange Dream’၊ 'Cinema'နှင့် 'Young' သီချင်း တင်ဆက်ခြင်းကို ပထမဦးဆုံး ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။